Nhazi oge na oge mmechi na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Oge nkwụsị bụ ngwá ọrụ na-adọrọ mmasị anyị tụlere ya n'oge gara aga nakwa na o nyeere anyị aka ịkwụsị usoro ma ọ bụ nye kọmputa iwu ka ọ gbanyụọ na akpaghị aka n'oge akọwapụtara. O di nwute na, a raara oru a nye gam akporo mkpanaka mkpanaka, obu ezie na ugbu a, anyi achotala aha otutu ihe na-adighi nma igha eji ya.
N'aka ozo, oburu na inwere igwe mkpanaka nwere sistemụ gam akporo, inwere ike jiri Shutdown ngụ oge ịtụ ya mechie n'oge ịchọrọ, n'agbanyeghị, enwerekwa nhọrọ ndị ọzọ ndị ọzọ ị nwere ike iji dabere na mkpa gị.
Etu esi edozie oge nkwụsị na gam akporo TV-Box
Na mbụ anyị ga-dokwuo anya na ekwentị mkpanaaka na ụfọdụ ụdị nke mbadamba na gam akporo sistemụ si 4.0 n'ihu nwere ọrụ na-akpali mmasị n'ime nhazi ya nke na-enye ndị ọrụ ya ohere ịgbanyụ ngwaọrụ ahụ na oge a kapịrị ọnụ, ka ọ ghara ịga n'ihu na-eri batrị ya. O di nwute, oru a adighi n'ime nhazi na ihe gam akporo TV-Box, ya mere anyị kwesiri iji oge nkwụsị, ngwa gam akporo ị nwere ike ibudata ozugbo na Playlọ Ahịa Google.
Mgbe ibudatara ma gbaa ọsọ oge nkwụsị, ngwa gam akporo maka oge izizi ọ ga-arịọ maka ikikere superuser, inwe inye ha nke mere na ọ nwere ike iji ikike ndị nchịkwa mee ihe; njikwa dị mfe ma dịkwa mfe, ebe naanị ị ga - eme ya kọwaa oge ị chọrọ ka ọ gbanyụọ na akpaghị aka ndị otu gị, ụbọchị ga-esonye na ozi a. Na ala nke windo enwere nhọrọ iji gbanyụọ, zipu ka ịmalitegharịa, ihi ụra n'etiti nhọrọ ndị ọzọ ị ga-ahọrọ dịka mkpa gị. Ikekwe ọ bara uru ịza na ọ bụrụ na anyị chọrọ akụrụngwa iji gbanyụọ ụbọchị ọ bụla n'oge a kara aka, anyị ga-ahazi ya kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na enweghị ọrụ ebe enyere anyị ohere ịhọrọ "ụbọchị niile" n'izu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi emechi mmechi nke gam akporo TV-Box na oge mmechi
Ndewo: Enwere m igwe onyonyo, ma ọ bụ igwe onyonyo, achọtala m ọtụtụ bọtịnụ wijetị iji gbanyụọ ihuenyo na wifi na ndị ọzọ, nsogbu bụ na m na-eji òké ikuku na ngwa ndị ahụ na-agbanyụ ihuenyo ahụ, ma ozugbo òké na-agagharị, voila, igwe onyonyo na arụ ọrụ ọzọ ...
Ajuju m bu ma oburu na enwere ihe iga ahapu igwe onyonyo na onodu ya, n'uzo di otua o gha emeghachi mgbe m puru ntanye na igodo ma ghara imeghari ya, ma obughi na m gha agbanyiri ngwa a, na maka ihe Achọrọ m na m ga-ahọrọ iji gbanyụọ ya na bọtịnụ gbanyụọ kama mmemme oge.
Ọ bụ ihe m lere anya dị ukwuu, hapụ ya na njikere mana enweghị m ike, ikekwe n'ihi na ngwa ngwa m chere na emebere iji kagbuo ụkpụrụ ma ọ bụ ọrụ mkpọchi mkpọchi, n'ihi nke ikpeazụ maka ihe doro anya ebe ọ ga-adị iwu na ọ gaghị ekwe omume itinye ụkpụrụ dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ òké agaghịzi arụ ọrụ, wdg ...
Ka o sina dị, amaghị m, naanị m na-ajụ ma enwere ihe yiri ya.